Yintoni i-Binance Smart Chain, kwaye idibana njani neMetamask-Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Yintoni i-Binance Smart Chain, kwaye idibana njani neMetamask
tag: Binance, IBinance Bridge, I-Binance Smart Chain, inkcaza.io, Metamask
I-Binance ayisiyi-Binance nje, ikwayi-Binance Smart Chain.
Kutheni le nto ithandwa kangaka kwiiprothokholi zayo zeDeFi? Ngaphezulu kwayo yonke imibulelo kwimirhumo yegesi, iikhomishini, ezisezantsi kakhulu xa kuthelekiswa nezo ze-Ethereum. Kwaye ngesantya sokuthengiselana esikhawulezayo. Zizinto ezimbini ezisisiseko zokutsala bonke abo barhwebi okanye nabo banomdla abangenawo amanani enkosana kwaye ke abo bakulumkele kakhulu ukugcinwa kwabo. Ukuba uzibona ukule ndawo, ngokuqinisekileyo ufuna ukwazi okungakumbi.
Awubhalisanga kwiBinance? Yenza nge eli khonkco lokuthumela ukugcina i-20% kwiikhomishini ngonaphakade, unenzuzo kwaye ndinenzuzo. Ngaphandle koko ungayisebenzisi! Ayisiyongxaki kuba, ixesha lokuziphendulela, Andinguye umcebisi wezezimali kwaye yonke into endiyithethayo ayijoliswanga ekunikezeleni ngengcebiso yotyalo-mali kwi-intanethi. Ndisebenzisa eli qonga ukukhumbula izinto ezinokubhideka entlokweni yam. Ndingayenza kwincwadana yokubhala, kodwa bendihlala ndicinga njalo ukwabelana kukukhathalela. Elona cebiso ndingathanda ukukunika lona: soloko ulumkile, ukuba ufuna ukurhweba nge-crypto, ukugqunywa ukuba utyala imali onokukwazi ukuyiphulukana ngaphandle kokuchaphazela ubomi bakho nakancinci.
I-BSC (i-Binance Smart Chain) ibamba amaqonga amaninzi e-DeFI enza isivuno esiphezulu okanye esisezantsi, esithi ke ngoko sibe nenqanaba lomngcipheko ophezulu okanye ophantsi ngokulandelelana. Ngalo lonke ixesha jonga indawo oya kuyo ukufaka imali, kugcwele siskemu (ukukrazula) nakwiBinance Smart Chain.
Yintoni i-Binance Smart Chain
Uqhagamshela njani kwi-BSC kunye neMetamask
Imali yedipozithi kwi-BSC
Ziphi izicelo zeDeFi ezikwiBinance Smart Chain?
I-BSC iyinyani engenye ye-Ethereum: zombini ezi blockchains zihamba nge-sync: zonke izicelo ezakhiwe kwi-ETH zinokuhambelana ne-BSC. Ukuba i-ETH ineentlawulo eziphezulu (iikhomishini) kubangelwa kukuba inethiwekhi ixinene, zininzi iziqinisekiso ezenziwa rhoqo kwisibini kwihlabathi liphela (i-ETH ibhlokhi ngokuchanekileyo isemthethweni) kunye nokungena kwenye yezi ndawo, umsebenzisi kufuneka azimisele ukuhlawula ngaphezulu kakhulu kunezinye. I-BSC yile esembindini, kukho inani elincinci leendawo kodwa ukusebenza okungcono. I-BSC ngokucacileyo iyinxalenye yeBinance, kodwa ayifanelanga ukudideka neBinance Chain eyinxalenye yoTshintshiselwano. Binance Smart Ikhonkco endaweni yoko ivumela ukubanakho ukwenza iiSivumelwano seSmart kunye nokuphuhlisa ii -apps (usetyenziso olwabiweyo)
Ukugqithiselwa kwemali kwi-BSC, nokuba ivela kwisipaji sangaphandle okanye ngokuthe ngqo kwisipaji esikwiBinance yeyona nto yokuqala yokuhlawula ingqalelo. I-Binance Chain ine-BEP2 esemgangathweni (Isindululo se-Binance Evolution Proposal 2) ngelixa i-Binance Smart Chain ine-BEP20 esemgangathweni. Lumka, zizinto ezimbini ezahlukeneyo.
Ngoku makhe siqwalasele indlela yokuqwalasela iMetamask ukuxhuma kwi-BSC kunye nendlela yokukhusela imali kwi-BSC.
IMetamask ngokungathandabuzekiyo yeyona bhulorho intle kunye nehlabathi leDeFi (ndithetha ngayo apha): lulwandiso lwesikhangeli (olusebenza kwisikhangeli esihambelana ne-chrome) esikuvumela ukuba unxibelelane nezi zicelo. Iliso kukhuphelo, kukho fakes ezibalekayo. Unokuzikhuphelela esemthethweni ngokuya kwiwebhusayithi yenkampani, kawenteng.io.
Nje ukuba ufake, unokukhetha ukwenza isipaji esitsha okanye ungenise isipaji onayo kwenye indawo: apho isipaji ngasinye sibhalwe ngaphakathi kweebhloko, iMetamask isebenza njengebhulorho kwaye ifikelela kwisipaji, ngumlamli. Kuyenzeka ukuba ungenise ngaphakathi isipaji sehardware (isipaji somzimba ukuze usigcine epokothweni - ukhuseleko alunakuze lube lukhulu kakhulu. hayi izitshixo zakho, hayi i-crypto yakho!Siza kuphinda singene kwesi sihloko.
Ukusukela ukuba iMetamask yadalelwa ukunxibelelana nenethiwekhi ye-Ethereum, nje ukuba ukwandiswa kusebenze oko kuya kuba yinethiwekhi ekhethwe ngokungagqibekanga, inokubonwa phezulu kufutshane nempungutye.
Nangona kunjalo, uyabona ukuba ikwayimenyu ehlayo: ukuba ndicofa kuyo, emazantsi ndinokungena RPC yesiqhelo. Le nto ikuvumela ukuba ufake iiparameter eziya kuthi zisivumele ukuba sidibanise iMetamask kwi-BSC.
Zeziphi iiparameter zokungena? U-Binance uthi ngqo kwi-Binance Academy yayo (Nantsi ikhonkco ukujonga ukuba zihlaziyiwe), kwaye ndiza kubambelela apha:
Igama lenethiwekhi: Uluhlu lweSmart
I-URL entsha ye-RPC: https://bsc-dataseed.binance.org/
Vimba i-URL yokuKhangela: https://bscscan.com
Kutheni le nto ndinemali eseleyo kunye ne-Ethereum kwaye ndiyibona ingenanto kunye ne-BSC? Kuba njengoko bekutshiwo ngaphambili, zizinto ezimbini ezahlukeneyo zokubhloka! Ngoku sikulungele ukufaka imali kwi-BSC yethu enxulunyaniswe nesipaji seMetamask kwaye siyisebenzise kwiDeFi nakwizicelo zayo.
Ke uyifaka njani imali kwisipaji sethu esitsha kwi-BSC? Yenziwe ngokuthe ngqo kwiBinance. Ukufaka isipaji sakho ngasekunene, kwiscreen seAkhawunti enkulu sifumana iqhosha lokurhoxa. Kwicandelo lokurhoxa sikhetha i-Cryptocurrency, sikhetha i-crypto esifuna ukuyidlulisela kwaye ngasekunene sinokukhetha ukuba sifuna ukuzidlulisela kwiingqekembe kwiBinance Smart Chain.
Ngokukhetha olu khetho, inkqubo iyasibuza: uqinisekile ukuba ubasa eqongeni okanye usetyenziso olubaxhasayo? Jonga ukuba ulahlekile! Kodwa sisete nje iMetamask, sikulungele ukuyenza.
I-Binance, ejika ibe yinkampani enzulu kakhulu, nokuba ithathe imibuzo encinci yokuqinisekisa ukuba uyazi into oyenzayo. Andifuni ukunika iimpendulo apha, kubalulekile ukuba uyiqonde le nto ngaphambi kokwenza njalo. Funda isikhokelo sam ngononophelo.
Ngokumisela idilesi yesipaji sethu, esisifumana kuMetamask phantsi kweAkhawunti 1, kunye nemali ye-crypto esifuna ukuyidlulisa, kufuneka nje siqinisekise ukuthengiselana kunye nesiQinisekisi sethu kwaye kunjalo Ukukubonisa obu bungqina, ndihambise i-0,1 BNB, malunga ne-20 €.
Ndabhala kwi-blockchain node ukuba i-0,1 BNBs isiwe kwi-BSC, kwidilesi endabaxelela yona. Khuphela idilesi yentengiselwano kwaye uyijonge kwiBscScan.com ukuba ufuna ukujonga la manyathelo. Ibhloko ye-blockchain yindalo yoluntu kwaye iyafumaneka kuye wonke umntu.
Apha, ukuba ndibuyela kwiMetamask yam, ndibona inani elidlulisiweyo eliguqulwe laba yi-BNB. Ngamanye amaxesha kuthatha imizuzu embalwa, ngamanye amaxesha iiyure ezimbalwa… Ndiqaphele umahluko ezimbalwa. Kodwa bayeza.
Kukho enye indlela apho IBinance Bridge, ekuvumela ukuba udlulise i-crypto ukusuka kwisipaji somzimba ngqo kwi-BSC.
Ekugqibeleni singanxibelelana neBSC kunye nokusetyenziswa kwayo kweDeFi.
defistation.io: Ukuncitshiswa sisiseko seeprojekthi ze-DeFi kunye newebhusayithi ye-analytics yeeprojekthi zezemali ezisasazekileyo ezakhiweyo kwaye ziqhutywa kwiBinance Smart Chain. Le projekthi iphuhliswa kwaye igcinwe yiCosostation kwaye ixhaswa ngemali nguBinance. Ungajonga ixabiso lilonke elitshixiweyo kwiiprojekthi zeDeFi kwiBinance Smart Chain ngexesha lokwenyani. I-metric kunye neetshathi eziboniswe kwi-Defistation zikuvumela ukuba ufumane ukuqonda kwiintsingiselo kunye nokukhula okunyukayo kwizemali ezisemthethweni.
Zonke iiprojekthi zeDeFi ezidweliswe kuDluliso zihamba kwinkqubo yovavanyo lokuqala, zilandelwa kukukhuthala okungqongqo kunye nothotho lonxibelelwano ukuqinisekisa ubunyani bolwazi olubonisiweyo kuthi. Iiprojekthi ezinebheji "eqinisekisiweyo" ecaleni kwegama lazo ziiprojekthi eziqinisekisile ukuba uluhlu lweekhontrakthi olubandakanyiweyo kubalo lweTVL luhlaziyiwe kwaye luchanekile.
Inkcitho iqokelela uluhlu lweekhontrakthi kunye nee-ABIs (ujongano phakathi kweemodyuli) zeekhontrakthi zeprojekthi nganye yokujonga ulungelelwaniso lwezoqoqosho kwiBinance Smart Chain. Ibhalansi iyonke yeKhontrakthi yeSmart nganye emva koko ibalwa ngokudibanisa inani elipheleleyo le-BNB kunye neethokheni ze-BSC iyure nganye. Ixabiso lilonke elitshixiweyo liboniswa ngokuthatha eli nani kwaye uliphindaphinde ngexabiso ledola (i-USD) yethokheni nganye.
Ngokukhawuleza nje ukuba ungene defistation.io, ubona olu luhlu lweeprojekthi zeDeFi, kwaye ngokungagqibekanga ihlelwa yiTshixiwe, oko kukuthi, isixa semali esisetyenziswe kwiprojekthi uqobo.
Le yindawo efanelekileyo yokukhetha iprojekthi yeDeFi oyithandayo, cofa kwiprojekthi onomdla kuyo (iliso lokuqala negama leNtengiso sisibhengezo- Isibhengezo), kwaye uqalise ukuyifunda.
Ngeqhosha Vula iDapp Uya kubanjiswa kule projekthi.
Ezinye zezi dapps kufanelekile ukuba uzihlalutye… hlala ubukele.
Inqaku elilandelayoUkurhweba kweMargin (nge-LEVA) kwenziwa njani kwi-Binance?